Marquesas ကျွန်းများ, ပရဒိသု | ခရီးသွားသတင်း
တောင်တန်းများ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောအပင်များ၊ ပင်လယ်ပြာများ၊ ကမ်းခြေများနှင့်နေရောင်ခြည်များ၊ Marquesas ကျွန်းများ။ ဒီကျွန်းစု တဟီတီမှကီလိုမီတာ ၁၅၀၀ အကွာတွင်ရှိသည် ၎င်းသည်စစ်မှန်သောပရဒိသုဖြစ်သည်။
သငျသညျဤရှုခင်းအမျိုးအစား, ပစိဖိတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ Adventures နှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများပျော်မွေ့, Gauguin နှင့် Brel လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အံ့သြဖွယ်ရေအောက်ကမ္ဘာကြီး၌ငုပ်ဘယ်မှာလမ်းလျှောက်လျှင်, ငါတို့ယနေ့သည်အတိုင်း, သင်၏ ဦး တည်ရာကို Marquesas ဖြစ်ပါတယ်။ သွားပြန်ပြီ!
၎င်းတို့သည်တဟီတီမှကီလိုမီတာ ၁၅၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိပြီးကျွန်းပတ်လည်တွင်တည်ရှိသည် ကျွန်း (၁၂) ကျွန်းသာရှိသော်လည်း ၆ ခုသာနေထိုင်သည်။ ယနေ့တွင်လူ ဦး ရေ ၉၂၀၀ ခန့်ရှိပြီး၊ ၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးစင်တာ Nuku Hiva ဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်းများသည်လှပသောသဲသောင်ပြင်များနှင့်လှပသောပင်လယ်အော်များနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ရှိသည် moutains, tienen ချိုင့်ဝှမ်း, tienen ရေတံခွန်များ, ဒါကြောင့်သူတို့ကမ်းလှမ်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကအများကြီးပါ။ မြင်းစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ၄ × ၄ ဂျစ်ကားစီးခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊... ထိုအခါငါတို့အထက်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့, အနုပညာရှင်များ Gauguin နှင့် Brel XNUMX အနည်းငယ်ရာစုအစအ ဦး မှာငြိမ်းချမ်းရေးအနည်းငယ်ရှာဖွေရေးအတွက်ဒီမှာလှည့်လည်။ Calvaire သုသာန်တွင်ရှိသောသူမ၏အုတ်ဂူများ၌ပင်ရှိသောကြောင့်သူတို့သည်သူမကိုထာဝရတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပြင်သစ်ပေါ်လီနီးရှားရှိအခြားကျွန်းများနှင့်မတူဘဲဤနေရာတွင်ရှိသည် ကမ်းရိုးတန်းကိုကာကွယ်ပေးသော lagons သို့မဟုတ်သန္တာကျောက်တန်းများမရှိပါ။ သား မီးတောင်ကျွန်းများ ချွန်ထက်သောအစွန်းများ၊ တောပေါက်များနှင့်နက်ရှိုင်းသောချိုင့်ဝှမ်းများရှိသောကျောက်ပေါက်များပေါ်ပေါက်လာသည့်ချွန်ထက်သောတောင်များပေါ်တွင်ရှိသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဝေးဆုံးကျွန်းစုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မည်သည့်တိုက်ကြီးများနှင့်မဆိုအလွန်ဝေးကွာသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇုန်ရှိသည်။
အုပ်စု၏အကြီးဆုံးကျွန်းမှာနူကူဟီဗာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Mystic Island ဟုလည်းလူသိများပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနေရာများစွာရှိသည် Hakaui ချိုင့်ရေတံခွန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည် Anaho ၏အနက်ရောင်ကမ်းခြေ၊ ရေအောက်ဥမင် ကျွန်းစုတစ်ခုစီ၏သစ်သားနှင့်ကျောက်ထွင်းထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အထင်ကြီးလောက်သောသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါများနှင့် Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤတွင်အဓိကမြို့သည် Taiohae, ကျွန်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်။
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအချက်မှာ ၁,၁၈၅ မီတာရှိသော Tekao တောင်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်သန္တာကျောက်တန်းများသို့မဟုတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်လိုင်းမရှိချေ။ ကျွန်း အများအပြားသမိုင်းဆိုင်ရာဘဏ္asuresာကိုရှိပါတယ်, ပိုလီနီးရှားစတိုင်ကျောက်တုံးများ၊ ခံတပ်များနှင့်ဘုရားကျောင်းများ။ ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်သည်၎င်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်စန္ဒကူးကုန်သွယ်ရေးကို ရည်စူး၍ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်၊
ကျွန်းသည်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိပြီးချိုင့်ဝှမ်းများသို့လှည့်လည်သွားလာသည့်သေးငယ်သောပင်လယ်အော်သေးသေးလေးများရှိသည်။ ဒီမှာရွာမရှိဘူး။ မြောက်ဘက်ကမ်းခြေတွင်အရေးကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုရှိပြီးနက်ရှိုင်းသောပင်လယ်အော်များရှိသည်။ အနahoနှင့် Hatihe'u A'akapa ။ တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်အခြားဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်များရှိသဖြင့်ဆိပ်ကမ်းများပိုများလာသည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ကျွဲနွားမွေးမြူထားသောစိမ်းလန်းသောမြက်ခင်းများရှိသည်။
ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအုပ်ချုပ်ရေးစင်တာကတောင်ဘက်မှာ Taioha'e ဖြစ်တယ်။ မင်းမြင်ဖူးလား Survivor, T ကစီးရီးV? ကောင်းပြီ, Nuku Hiva တွင်စတုတ္ထရာသီသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သည်။
မာကေးဆပ်ကျွန်းများကိုမြောက်ပိုင်းကျွန်းများအဖြစ်ပိုင်းခြားထားသည်။ ရှစ်ကျွန်းရှိသည်။ တောင်ပိုင်းကျွန်းများ (၇) ခုနှင့်မြောက်ဘက်ရှိကျွန်းငယ်များဖြစ်လာခြင်းမရှိသောတောင်ပို့အချို့ရှိသည်။ ဒုတိယအရေးအပါဆုံးကျွန်းမှာ Hiva Oa ဖြစ်သည်အုပ်စု၏ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းနှင့်တောင်ဘက်ကျွန်းများလည်းဖြစ်သည်။
ဒီမှာဆိပ်ကမ်းမြို့ပါ Atuona ဤဆိုက်သည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုအနောက်ဘက်ထိထိစပ်နေသောပထမဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောနိုင်တယ် ၎င်းသည်အုပ်စု၏သမိုင်းအရှိဆုံးကျွန်းဖြစ်သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာအလွန် Tiki ရုပ်ပွားတော်များပါဝင်သည်ကြောင့်နေရာဖြစ်ခဲ့သည် အဲဒီမှာပန်းချီဆရာ Paul Gauguin နဲ့ဂီတပညာရှင် Jacques Brel တို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ဒါဟာအစအဖြစ်လူသိများသည် Marquesas ဥယျာဉ် ဒါကအရမ်းစိမ်းလန်းပြီးမြေသြဇာကောင်းတယ်။
Hiva Ova နှင့်အတူကမ်းခြေရှိပါတယ် ကမ်းခြေနှင့်ကမ်းပါး ရေငုပ်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်သော်လည်း၊ တချိန်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပုံရသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရေးအပါဆုံးမြို့မှာ Atuona ဖြစ်သည်Taaao ပင်လယ်အော်၏တောင်ဘက်အဆုံးတွင်ကျွန်းပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးတောင်နှစ်ခုဖြစ်သော Temetiu တောင်နှင့် Fe'ani တောင်တို့ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
နောက်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် Ua Pou၊ တတိယမြောက်ကျွန်းအရွယ်အစား။ ကြီးမားတယ် basalt ကော်လံ, ဒဏ္legာရီသူရဲ, Poumaka နှင့် Poutetaunui ၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံပြီမီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ထုတ်ကုန်။ ၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် Robert Louis Stevenson ကသူတို့နှင့်တူသည်ဟုပြောရန်ထိုတိုင်များကလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည် ဘုရားကျောင်း steeple မှတက်ရှာဖွေနေမီးတောင်မုတ်ကျွန်းပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောဟားခါးဟူးရွာ၏ပင်လယ်အော်ကိုသူတို့ကြည့်နေစဉ်။
Ua Huka ဟာအပျိုစင်လေးပါ။ မြင်းရိုင်းများ၊ သဲကန္တာရအရောင်များ၊ ဆိတ်များ ... Tahuata သည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်အသေးငယ်ဆုံးကျွန်းဖြစ်သည် အရာ၏ကစည်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းကို ၁၈ ရာစုတွင်သွားရောက်ခဲ့သောဗြိတိသျှစူးစမ်းရှာဖွေသူဗိုလ်ကြီးကွတ်ကသိသည်။ Hiva Ova မှရေဖြင့်သာသုံးနိုင်သည် ဒါကြောင့်တစ် ဦး အကြံပြုလေ့လာရေးခရီးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မြေသြဇာကောင်းသောချိုင့်ဝှမ်းများသည်ရှင်းလင်းသောရေဖြင့်ပင်လယ်အော်များကိုလျစ်လျူရှုပြီးတိတ်ဆိတ်စွာ နေ၍ ဒေသခံရေမွှေးကိုအိမ်သို့ယူဆောင်သွားသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆေး သူတို့ကဒီမှာပြောသကဲ့သို့တစ်နှစ်တစ်ရာရေနံ။
Fatu hiva သမုဒ္ဒရာထဲသို့ကျဆင်းသွား။ အပေါ်မှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုမြင်ချက်များပေးသောမြင့်မားသောချောက်ကမ်းပါးများရှိသည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင်စူးစမ်းရှာဖွေသူ Thor Heyerdahl နှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည်ဤတွင်နေထိုင်ရန်အချိန် နေ၍ စာအုပ်တစ်အုပ်တွင်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုအကျဉ်းချုံးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲသွားပုံရသည်။ မြို့သူမြို့သားအများစုသည်အိုမိုအာရွာနှင့်၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိပ်ကမ်းတွင်နေထိုင်ကြသည်။ Hana Vave .ရိယာကိုကျော်ကြားသူများကကာကွယ်ထားသည် အပျိုကညာအထူးသဖြင့်နေ ၀ င်ချိန်ကိုကြည့်ပါ
ဒီကျွန်းတွေကိုကြိုက်လား သင်ကိုယ်တိုင်သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုသည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းကိုဂရုပြုပါ လက်တွေ့ကျသောသတင်းအချက်အလက် သူတို့ဟာဂန္တ ၀ င်ပြင်သစ်ပေါ်လီနီးရှားခရီးသွားလမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့ကျွန်းတွေဖြစ်တဲ့ Society ကျွန်းများ၊ Bora Bora၊ Moorea၊
ကျွန်းခြောက်ကျွန်းရှိပြီးလေးကျွန်းမှာလေဆိပ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဒေသခံ, ဒါကြောင့်သင်လေယာဉ်သို့မဟုတ်လှေဖြင့်အဲဒီမှာရနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တဟီတီမှသင်ပျံသန်းသောလေယာဉ်ကိုနေ့စဉ်နူကူဟီဗာနှင့်ဟီဗာအိုသို့လေယာဉ်ဖြင့်ရွေးပါ။ အခြားကျွန်းများသို့သွားရန်, သင်သည်ဤနှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြတ်သန်းရပေမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်လှေဖြင့်သွားရန်ရွေးချယ်လျှင်၊ အဖြစ်မှန်မှာပိုလီနီးရှားကို ဖြတ်၍ မည်သူမဆိုသင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမည်ဆိုပါကရွေးချယ်စရာများကိုသာရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ရွက်လွှင့်သော်လည်းတစ်ပတ်လျှင်ယူရို ၃၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သင့်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရွက်လှေရှိပါကသင် Galapagos သို့မဟုတ် Cook Islands မှထွက်ခွာနိုင်သည်။
သငျသညျပျံသန်းနိုင် Marquesas ကျွန်းများအကြားရွှေ့ဖို့အဓိကကျွန်းနှစ်ကျွန်းကြားတွင်တစ်နေ့လျှင်ပျံသန်းမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုရှိသည်။ Ua Pou နှင့် Ua Huka ကျွန်းများသည်နေ့စဉ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်အတူကံမကောင်းပါ။ A ကောင်းဆုံးစိတ်ကူးကတော့ဝယ်ဖို့ပါ Tahiti Air နှင့်အတူ Marquesas ဖြတ်သန်း။ သင်တို့သည်လည်းလှေဖြင့်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်, ဒေသခံတစ် ဦး ငှားရမ်း, သင်၏လှေငှား။ Tahuata နှင့် Fatu Hiva ကျွန်းများသို့သွားသော Marquesas del Sur တွင်အများပိုင်လှေတစ်ခုရှိသည် (၅ နာရီခရီးစဉ်အတွက် ၆၅ ယူရိုခရီးစဉ်ဖြင့်) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » လမ်းပြ » Marquesas ကျွန်းများ, ပရဒိသု